Xafiiska Xeer Ilaalinta Guud iyo cadaalada DDSI oo shir qiimayn ah u qabtay Gudoomiyayaasha xafiisyada cadaaladaha ee 9 gobol ee DDSI. - Cakaara News
Xafiiska Xeer Ilaalinta Guud iyo cadaalada DDSI oo shir qiimayn ah u qabtay Gudoomiyayaasha xafiisyada cadaaladaha ee 9 gobol ee DDSI.
Jigjiga(CN) Talaado Feb-17-2015. Shirkan oo uu soo qaban qaabiyya xafiiska cadaalada iyo xeerilaalinta guud ee DDSI ayaa ay ka soo qaybgaleen masuuliyiinta xafiisyada cadaaladaha ee 9 gobol ee DDSI. Haddaba shirkan oo ay goob joog ahaayeen wasiirka xafiiska cadaalada DDSI mudane cadijamaal ahmed qolobi iyo wasiir ku xigeenka cadaalada DDSI mudane a/irshaad cali ayaa waxa uu ujeedadiisu ahaa shir lagu qiimaynayay waxqabadkii bilihii ugu danbeeyay xafiisyada cadaaladaha ee 9 gobol ee DDSI.
Waxaana shirkan qiimaynta ah ugu horayntii ka hadlay wasiirka cadaalada DDSI mudane c/Jamaal ahmed qolonbi oo sheegay in shirkan qiimaynta ah diirada lagu saarayo waxqabadkii xafiisyada cadaaladaha gobolada deegaanka wixii ay ka qabteen qorshayaashii u yaalay waxaan qabsoomin iyo waliba sobobta ayna u qabsooni.
Waxaa kale oo uu sawiirku si qoto dheer ugu nuux nuuxsatay in shirkan qiimaynta ah lagu sii karaar galindoona dar dargalinta hawlaha shaqada cadaaladah iyo waliba sii xoojinta iyo gufaynta meelaha ay ka muuqdaan gol dalooladu.
Dhanka kale waxaa isaguna ka hadlay furitaankii shirka qiimaynta ah wasiir ku xigeenka cadaalada DDSI mudane a/irshaad cali nuur oo soo bandhigay anjandayaasha shirkan qiimaynta ah anjandayaashaasi oo ku qotomay waxqabadkii xafiisyada cadaaladaha ee bilihii ugu danbeeyay iyo sii xoojinta qorshyaasha u yaala xafiisyada cadaaladaha ee gobolada deegaanka.
Intaasi ka dib ayaa waxaa la guda galay soo bandhigida waxqabadyadii bilihii ugu danbeeyay ee xafiisyada cadaaladaha ee 9ka gobol ee DDSI iyada oo ay madax xafiiseedyada xafiisyada cadaaladaha ee 9 gobol ay u soo bandhigeen warbixinadii waxqabadka una soo bandhigay si ay ku jiro cad cadaan iyo isla xisaabtan. Ugu danbayntii shirkan qiimaynta ah ee uu soo diyaariyay xafiiska cadaalada DDSI loona qabtaty xafiisyada cadaaladaha gobolada ayaa waxa uu socondoonaa mudo 3 maalmood ah waxaana la filayaa marka uu dhaamaado in ay ka soo baxaan natiijooyin wax ku ool ah